မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-03 > ပထမဦးဆုံးအသငျသညျ!
မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ သင်သည်သားကောင်အခန်းကဏ္inတွင်နေထိုင်ရသောအခါသက်သောင့်သက်သာရှိပါသလော။ သငျသညျကယ့်ကိုခံစားနိုင်သည့်အခါဘဝကအများကြီးပိုကောင်းတယ်။ တီဗွီမှာကျွန်တော်ဟာတခြားသူတွေအတွက်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတဲ့လူတွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပုံပြင်တွေကိုမကြာခဏကြည့်တယ်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ် own ည့်ခန်း၏လုံခြုံမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှသက်တောင့်သက်သာတွေ့မြင်နိုင်ပြီးအတွေ့အကြုံရနိုင်ပါသည်။
Jesus ruft das ganze Volk und seine Jünger zu sich und sprach: «Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen» (Markus 8,34 NGÜ)။
Jesus beginnt seinen Jüngern zu erklären, dass er viel erleiden wird, verworfen und getötet werden muss. Petrus regt sich über das, was Jesus sagt auf und Jesus tadelt ihn deswegen und sagt, dass Petrus nicht die Dinge Gottes beachtet, sondern die Dinge der Menschen. In diesem Zusammenhang erklärt Christus, dass die Selbstverleugnung ein «Ding Gottes" und eine christliche Tugend ist (Markus 8,31-33) ။
ယေရှုဘာပြောသလဲ ခရစ်ယာန်တွေကပျော်စရာမကောင်းဘူးလား။ ဟင့်အင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းဟူသည်အဘယ်နည်း။ ဘဝသည်သင်နှင့်သင်လိုချင်သောအရာမျှသာမဟုတ်ဘဲအခြားသူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ရှေ့တွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏သားသမီးများပထမ၊ သင်၏ခင်ပွန်းပထမ၊ ဇနီးပထမ၊ သင့်မိဘများပထမ၊ သင့်အိမ်နီးချင်းပထမ၊ သင်၏ရန်သူပထမစသည်။
Das Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen widerspiegelt sich im grössten Liebesgebot in 1. ကောရိန္သု ၁3. Wie könnte es lauten? Die Person, die sich selbst verleugnet, ist geduldig und freundlich; sie oder er ist nie neidisch oder prahlerisch, nie mit Stolz aufgeblasen. Diese Person ist nicht unhöflich und pocht nicht auf ihre eigenen Rechte oder Wege, denn Christi Anhänger sind nicht selbstsüchtig. Er oder sie ist nicht verärgert und achtet nicht auf erlittenes Unrecht. Wenn du dich selbst verleugnest, freust du dich nicht über Ungerechtigkeit, vielmehr, wenn Recht und Wahrheit herrschen. Sie oder er, deren Lebensgeschichte die Selbstverleugnung einschliesst, ist bereit, alles durchzustehen, komme was wolle, ist auch, bereit, das Beste von jeder Person zu glauben, hofft unter allen Umständen und erträgt alles. Die Liebe Jesu in solch einer Person, versagt nie.